Falimaha Rasuullada cutubka 2aad – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on June 5, 2017 June 6, 2017 by Omar
2 Oo waxaa filanla’aan samada ka yimid sanqadh sida dabayl xoog leh oo aad u dhacaysa, oo waxay buuxisay gurigii ay fadhiyeen oo dhan.
16 Laakiin waxanu waa wixii lagaga dhex hadlay nebi Yoo’eel,
22 Rag yahow reer binu Israa’iil, hadalladan maqla; Ciisihii reer Naasared oo ahaa nin Ilaah idiinku caddeeyey shuqullo xoog leh iyo yaabab iyo calaamooyin oo Ilaah ku sameeyey isaga gacantiisa idinka dhexdiinna, sidaad idinka qudhiinnuba u og tihiin,
25 Waayo, Daa’uud baa isaga ka hadlay, oo yidhi, Had iyo jeerba Rabbigaan hortayda ku arki jiray, Maxaa yeelay, midigtayduu joogaa si aan la ii dhaqaajin.
29 Walaalayaalow, waxaan si bayaan ah idiinku sheegi karaa in awowe Daa’uud dhintay, lana aasay, xabaashiisuna ilaa maanta waa inagu dhex taal.
34 Maxaa yeelay, Daa’uud samooyinka kor uma aadin; laakiin isaga qudhiisaa leh, Rabbigu wuxuu Sayidkayga ku yidhi, Midigtayda fadhiiso
The audio is from the SIM 2007 drama version as it appears on the Bible.is site.
Posted in Kitaabka Quduuska Ah, QoraalTagged acts, bibleis